DAAWO:DEG DEG Yaab Dhalinyarad Askarta Dhulbahante ee Puntland Tababar u Diidey Kana Masaafurisey Carmo - Wararka Khaatumo , Somaliland , Puntland Iyo Somalia
HomeMaqal Iyo MuuqaalDAAWO:DEG DEG Yaab Dhalinyarad Askarta Dhulbahante ee Puntland Tababar u Diidey Kana Masaafurisey Carmo
October 18, 2021 News Maqal Iyo Muuqaal, Puntland, Somaliland, Wararka Khaatumo, Wararka Maanta 10
adeer meeshaan afarsom wax tababara dowlad kama qaban dayactir laguma sameen ceelkii biyaha asbuucii dhoweed dadka loobarya dowladu fidmo ayee wadaa dhulku waa federaal wixii laqabanaayo madaxda maamulka halagala tashado
Walaalaha Marqaan News waxaa aannu kacodsanaynaa inay kataxaddaraan warxumo-tashiilka, ayna iskala weynaadaan hurinta colaadaha sokeeye ee aalaaba kadhasha wararka la xamaasadeeyay ee sida kii boggii kan kahorreeyay lagu sootebiyay.
Warkan sidii boggii hore lagu sootebiyay waxaa kuxusnaa in raggaas basas lagu qaaday oo degaannadoodii lagu simay, sidaas aawadeedna uu muuqaalkani yahay mid ay iska duubeen kahore inta aan gaadiidka loo diyaarinin. Su’aalo badan oo in la salgaaro u baahan ayaa qisadan dul hoganaya, ayna kamid tahay midda kusaabsan inay raggaasu iyagu iskooda xaruntaas iska xaadiriyeen iyaga oo aan nadaamkii saxda ahaa ee xulashada soomarin, iyo in kale.
Waxaa aan marnaba sax iyo xaq toona ahayn in arrinkan loo ekaysiiyo inay madax Majeerteen ahi wiilal Dhulbahante ah ku digteen, iyaga oo Dhulbahantenimadooda kuxumeynaya. Haddii ay Puntland tabasho ka qabaan, haddee Puntland waa maamul dhisan oo Daarood oo dhan iyo Soomaali Maxamedba katirsan yihiin; haddii uu maamulku qalad galayna, sax iyo caqligal toona ma aha in beel gaar ah loogu aaneeyo oo eeddana dusha looga tuuro.
Sida xaqiiqada ahna, Dawladda Puntland shaqaalaheeda iyo saraakiisheeda ugu sarreeya waxaa ugu badan kuwo beesha Dhulbahante udhashay. Marka, waxay taasu daaqadda katuureysaa wixii andacood ah ee ah “Puntland waa Majeerteen” oo “Majeerteen baa Dhulbahante meesha kuxumeeyay”.
Bahda Marqaan News, maadaama aydin tihiin mareegto magaca beesha Dhulbahante kuhadasha, qaabka aydin warkan utebineysaan waa mid ay natiijadiisu noqonayso oo keliya inay beelahan walaalaha ah kusii kala dhintaan oo islamarkaana muujinaya inaydin idinku – Dhulbahante ahaan – tihiin kuwa cuqdadda xun uqaba tolkiina Majeerteen oo colaaddana hurinaya.
Fadlan, kawaantooba talaxumada noocan ah oo si miizaaman oo caddaaladdana kusaleysan wararka usoo tebiya. Waa iga talo sokeeyenimo.
Inkastaa oo aad u hadal egtahay Qof dawakhsan ama carruur ah oo aadan hadalalkaaga ku salayn xaqiiq iyo run u dhawaasho midna, Maamul Beeleedka Majeerteen ma ahan maamul Daarood iyo mid Gaalo Somali midna oo xataa wuxuusan u dhaxayn Beelaha Majeerteen dhexdooda.
Waa Maamul ku dhisan miisaan xumadii iyo musuqmasuqii majeerteen caanka ku ahaa, Wax Cusbna ma ahan in beelaha kale ee Masmulka Majeerteen ka tirsan lagu Bahdilo, lagu weeraro laguna Jawr Falo.
Adiga Awdal ahaan xaq uma lihid inaad ka hadasho Arrimaha Dhulbahante iyo Masiirkooda,Qofku hadduusan Cabbirin Runta Arrinta uu ka hadlayo waxay noqotaa sheeko carruureed.
Hore waxan kuugu aqaannay Jawaan Gaari Futada uga xiran kkkk maantana waxad u muuqaata Birta Gaariga hore uga hiran.
Dhulbahante maanta uguma horrayso Bahdilaad iyo ku Jowrfal Pintland kula kacdo, waxay tanina ku biiraysaa taariikho hore.
Waxay Markhati Nool u tahay Maamul Beeleedka majeerteen inuu yahay Guri beeleed ay maamulaan wax magarato maangaab ah.
Odeygii Owlal maanta waxa uu is leeyahay qari Dhulbahantihii ay Puntland Mastaafurisay. Kkkkk
Waxaasoo kalaa dhaca hadaad is tidhaa difaac wax aanan la difaaci Karin.
Budhleyn waa iney inta kalee ku hadheyna noosoo celisaa.
Saaxiib salaamu calaykum, kadibna waxaan kuu sheegayaa inaad arintaa haleeshay oo aanay jirin cid si ka fiican u dhigi lahayd, saaxiibadeen marqaanna mararka qaarkood khatif badan ayay galaan oo aad moodayso inaanay ka taxadarin qoraalada.
kuna dheh marqaan war wax qora oo wax wanaagsan qora, oo wax run ah qora oo haka baydhina qadiyada iyo wanaaga.
Wacaleykum Salaam Waraxmatullaahi Wabarakaatuhu adigana walaal.
Aad ayaan kaaga mahadinayaa waxgaradnimada iyo garaadnimada aad ku muujisay guubaabadaada qaaliga ah.
Kollay dadka ahlu iimaanka ah ee aqoonta iyo ilbaxnimadana lagu galladay sidaada xaqu iyo baadhilku bayaan ayay ugu kala cadyihiin oo marna lama qaldi karo.
Kuwo waxaase jira sida labadan kor iskaga dinaahay sidooda caadifado maran iyo qabyaalad ku daxaleysatay laburqada oo aan anigu cawaanta kutiriyo; sida waxa ay soo xarxarriiqaan laga dheehan karona, afkaar maskaxiyan u bisil oo rag lala hor yimaaddo ma hayaan ee ragga kale ayay dhoocilo hinaasay sidooda uga daba yuusaan oo iska caayaan.
Laand-ruugar ina Laad-roobal says:
Raggani ma ciidan baa?
Ciyaarta naga daaya meeshan ragga ka muuqdaa waa rag u eg kuwa telefoonada habeenkii dadka ka reeba, haday meel iiga soo hor baxaan ciidan baad sheegataye dib umaba eegeen.
Raggan oo hub laguubu dhiibay ba idinku ka warama?
Ciidanku sow kii ahaan jiray maaha aljisu saliim fii caqli saliim, nin caawa oodhan qaad cunayaa, muxuu difaaci karaa, cid kale ma la waayay?
Raggani ma ciidan baa? Ciyaarta naga daaya meeshan ragga ka muuqdaa waa rag u eg kuwa telefoonada habeenkii dadka ka reeba, haday meel iiga soo hor baxaan ciidan baad sheegataye dib umaba eegeen. Raggan oo hub laguubu dhiibay ba idinku ka warama? Ciidanku sow kii ahaan jiray maaha aljisu saliim fii caqli saliim, nin caawa oodhan qaad cunayaa, muxuu difaaci karaa, cid kale ma la waayay?
Raggan ma buutland bay ciidan u yihiin?
waa raggi masaska cuni jiray ee kumaandooska ahaa.
Ilaahba quraankiisa ku yiri: Eey haddii la eryo iyo haddii kaleba Carrabkuu laalaadiyaa, Adigu Eey baa tahay haddaad hadasho iyo haddaad Aamustaba Odaygii lugaha Muruxsanaa unbaa tahay kkkk kkk kkkk
Nin aan ku Aqoon u qosol, Aabbahaagii lugaha Doorada lahaa was.
Weligaaba waxa isku daydaa inaad difaacdo Dulmi, waxad isku daydaa inaad Daahiriso Doofaar aan xalaal noqonayn.
Weligaaba Hiigle hergeb Duray sidiisii.